Isu tatova neturera uye zuva rekuvhura reApple TV + dzakateerana "Invasion" | IPhone nhau
Isu tatova neturera uye zuva rekuvhura kweApple TV + dzakateerana «Kupinda»
Iyo itsva blockbuster iri kupfurwa yeApple TV + yatove nezuva rekuburitsa. Serie "Kurwisa»Tinogona kuzviona kubva Gumiguru 22. Tinofanira kumirira mwedzi mishoma.
Asi ikozvino tinogona kugadzikana nekuona yekutanga tirera yeiyi sainzi ngano dzakateedzana dzinovimbisa kubudirira Chinhu…
Apple ichangobva kuzivisa zviri pamutemo kuti iyo sci-fi mutambo unoteedzana "Invasion" kubva Simon Kinberg ("X-Men mafirimu", mafirimu "Deadpool", "The Martian") naDavid Weil ("Vavhimi"), vachaburitswa muna Gumiguru 22.
Iwo akateedzana anosanganisira Zvikamu gumi. Gara kumakondinendi akasiyana, "Invasion" inotiratidza kurwiswa kwevatorwa kupasi rese kuburikidza nemaonero akasiyana kubva kumatunhu akasiyana epasi.
Iri nyeredzi Shamier anderson ("Bruised", "Muka"), Golshifteh Farahani ("Kubvisa", "Paterson", "Muviri Wenhema"), Sam neill ("Jurassic World: Dominion", "Peaky Blinders"), Firas nassar ("Fauda") uye Shioli Kutsuna ("Deadpool 2", "Wokunze").
"Invasion" yakanyorwa ikaburitswa naKinberg naWeil uye naJakob Verbruggen ("Iye Alienist," "Kudonha"), uyo akatungamira zvikamu zvinoverengeka. Audrey Chon ("Iyo Twilight Zone"), Amy Kaufman ("Kana Vationa") naElisa Ellis vanoshanda sevatungamiriri vepamusoro pamwe naAndrew Baldwin ("Wekunze"). Katie O'Connell Marsh ("Narcos," "Hannibal") ndiye mutungamiri mukuru weBoat Rocker Studios.
Iyi nhepfenyuro nyowani yeMartians inopinda ichaita nyika yayo kutanga paApple TV +. Zvikamu zvitatu zvekutanga zvichatanga kuratidzwa panguva imwe chete 22 yeOctober yegore rino, ichiteverwa nezvikamu zvitsva, Chishanu choga choga, kusvika pakupedza zvitsauko gumi zvemwaka wekutanga.
Izvo hazvina kusimbiswa neApple parizvino, asi isu tine chokwadi chekuti pachavepo mimwe mwaka ye "Invasion", pasina kupokana. Pamari yemari yakatorwa nemifananidzo iyi yezvikamu gumi zvekutanga, ichave iri kubudirira, uye kambani ichatoda kuitora nekuiwedzera nemwaka yakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Isu tatova neturera uye zuva rekuvhura kweApple TV + dzakateerana «Kupinda»
Chitsva chiitiko chiitiko chiri kuona. Pemberera Zuva reYoga Zuva